Home Wararka Guriceel oo qarka u saaran dagaal & kumanaan qoysas oo ka barakacay...
Sida uu soo tabinaya wariyaheena ku sugan magalaada Guriceel, waxaa fashil ku soo dhamaaday waan-waan laga dhex-waday hogaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo AhluSunna Wajameeca. Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo siyaasadda Gobolka Banaadir, Cali Yare Cali ayaa sheegay “Galmudug aysan marna ogolaan wax-wada-hadal oo xalku ula muuqdo “Dagaal”.
Dagaalka dhanka dowlada federaalka waxaa hogaaminaya Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka, Janaraal Odowaa. Janaraalka ayaa lagu eedeedayay in uu Guriceel u aaday dagaal isaga oo sheeganaya Taliyaha Ciidanka XDS.
Wasiirkii hore ee Amniga ee Galmudug fiqi ayaa yiri “Odowaa shalayna wuxuu hogaaminayey dagaalkii muddo kororsiga qasabka ah ee Muqdisho iyo kii banaanbaxyada lagu diidanaa”.
Dhanka kale madaxa hogaanka AlhuSunna, Shiikh Shaakir ayaa dhankooda waxa ay wadaan diyaar garoow xoogan oo ay doonayaan in ay isaga caabiyaan weerar kaga yimada Qoor Qoor oo huwan magaca Farmaajo.
Mudo ka badan 7 cesho ku dhaw waxaa magalaada Guriceel ku hareeraysan ciidanka dowlada federaalka, laaakiin ma jirto tilaabo ay horay u qaadeen, waxaana jirta cabsi laga qabo in dagaalka ka qarxa Guriceel uu keeni doono dhimasho iyo khasaare aduun.